Tilmaamaha Safarka Agra Halal eHalal Mart Mart
Safarka Xalaal ee Hindiya
Tilmaamaha Safarka Agra Xalaal
Agra waa magaalada Taj Mahal, ee waqooyiga Hindiya gobolka Uttar Pradesh, oo 200 oo kiilomitir u jirta Delhi.
Agra waxay leedahay seddex goobood oo UNESCO ah oo hidaha aduunka ah Taj Mahal iyo Agra Fort magaalada iyo Fatehpur Sikri 40 km u jirta. Waxa kale oo jira dhismayaal kale iyo qabriyado kale oo badan laga soo bilaabo Agra wakhtiyadii ammaanta ee ay ahayd caasimada Boqortooyadii Mughal.
Saddexdaan goobood ka sokow, magaaladu wax kale oo yar oo ay kula talin kartaa ma leh. Wasakhda, inta badan qiiqa iyo wasakhda, ayaa ah mid baahsan oo dadka soo booqda waxaa ku daaqaya raxan raxan toor iyo waratada taallo walba, marka laga soo tago gudaha Taj Mahal oo, markii aad gasho, ka madax bannaan khiyaanooyinka iyo touts. Goobahaani waa qaar ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee adduunka mana jiro safar loo aado Hindiya oo dhameystiran iyada oo aan ugu yaraan hal booqasho lagu tagin Taj. Inta badan dadka soo booqda, hal maalin Agra ayaa ka badan intii ku fillan.
In kasta oo Agra waqtigiisii ​​ugu fiicnaa uu ahaa caasimadda Boqortooyada Mughal intii u dhaxeysay 1526 iyo 1658, magaalada waxaa la aasaasay waqti hore. Tixraacii ugu horreeyay ee Agra waxay ku jirtaa qadiimiga qadiimiga ah, Mahabharata, halka Ptolemy uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee ugu yeera magaciisa casriga ah. Taariikhda la duubay ee Agra waxay bilaabmaysaa qarnigii 11aad, iyo 500 sano ee soo socota, magaaladu waxay isku beddeshay gacmo u dhexeeya boqorro kala duwan, Hindu iyo Muslim labadaba.
Sanadkii 1506, Sultan Sikandar Lodi, oo ahaa taliyihii saldanadda Delhi, wuxuu caasimaddiisa ka raray Delhi una beddelay Agra. Wiilkiisa Ibrahim Lodi wuxuu ahaa taliyihii ugu dambeeyay ee boqortooyadii Lodi, maadaama looga adkaaday 1526-kii Babur, oo ahaa taliyihii ugu horreeyay ee Mughal, dagaalkii Panipat. Agra sidoo kale wuu dhacay, wuxuuna noqday caasimada Mughals, xukunkiisa Agra wuxuu ahaa mid aan kala go 'lahayn marka laga reebo mudo kooban oo udhaxaysay 1540 iyo 1556. Sanadkii 1540, Sher Shah Shuri wuxuu afgembiyay Humayun oo noqday taliyihii inta badan Waqooyiga Hindiya, oo ay kujirto Agra. Ka dib dhimashadii Sher Shah Suri faraciisii ​​waxay muujiyeen inaanay u sinnayn hawsha xukunka boqortooyada, Hemu, jeneraal Hindu ah oo ka tirsan Suri wuxuu noqday taliye wax ku ool ah oo hadhow isu caleemo saari doona King Hemachandra Vikramaditya sida boqortooyadu ula kulantay weerar kaga yimid Mughals oo dib loo soo nooleeyay. 1556, Hemu waa laga adkaan lahaa oo waxaa lagu dili lahaa dagaalkii labaad ee Panipat, waxayna Mughals dib u heleen Agra.
Mughals waxay ahaayeen wax dhisayaal weyn. Babur ayaa dhisay Aram Bagh (beerta nasashada) oo loo ekeysiiyay beertii janno, halkaasoo ugu dambeyn lagu aasay dhimashadiisa ka dib. Awowgiis Akbar ayaa dib u hagaajiyay Agra Fort oo la dhisay Fatehpur Sikri, magaalo dhan oo ku taal duleedka Agra. Wuxuu sidoo kale u magacabay Agra isla magaciisa, magaaladana waxaa loo yaqaanay Akbarabad intii ay ku jirtay gacanta Mughal. Akbar awoowgiis Shah Jehan ayaa Agra siin lahaa taajkeeda ugu caansan, the Taj Mahal, oo ah masaajidka xaaskiisa uu jecel yahay, Mumtaz Mahal. Taj waxaa lagu dhisay marmar cad. Waxay qaadatay 20 sano in la dhiso, iminkana adduunka oo dhan ayaa loo yaqaan taalo jacayl. Halyeeyada ayaa leh in Shah Jehan uu doonayay nuqul Taj ah oo lagu dhisay marmar madow oo noqon lahaa meeshii ugu dambeysay ee uu ku nasto. Ma jiro wax taageero ah oo loo hayo aragtidan, laakiin xitaa haddii ay run ahaan lahayd, waxay u egtahay in aan la fulin. Wiilkiisa Aurangzeb wuxuu ahaa mid naxariis badan oo cibaado badan, mana helin waqti ama u janjeera inuu ka sheekeeyo awoowayaashiis, isagoo doorbiday inuu lacagtiisa ku bixiyo dagaalada ka socda Koonfurta Hindiya. Sikastaba xaalku ha ahaadee, xitaa intii uu xukunka hayay Shah Jehan, oo ahayd xilligii boqortooyadii Mughal ay taagneyd heerkeeda, dhismaha Taj wuxuu culeys saaray kheyraadka boqortooyada wuxuuna sababay abaar yar oo ka dhacday Agra. Shah Jehan aakhirkii waxaa lagu aasay Taj-ka cad, oo ku xigta gacalisadiisa Begum.
Shah Jehan, ka sokow inuu siiyay Agra sheegashadeeda ugu weyn ee caanka ah, sidoo kale wuxuu mas'uul ka ahaa inuu bilaabo hoos u dhaciisa, isagoo go'aansaday inuu caasimaddiisa u wareejiyo Shahjehanabad, oo hadda loo yaqaan Old Delhi, 1658. In kasta oo Aurangzeb uu amar ku bixiyay in dib loogu laabto, tani sidoo kale waqti gaaban ayey qaadatay, markii uu u wareejiyay xaruntiisa koonfureed dhanka Aurangabad si diirada loogu saaro dagaalladiisii. Agra wuu diiday, sidoo kale Boqortooyadii Mughal ayaa iyana diiday. Magaalada aakhirki waxaa qabsaday Marathas, oo u bixiyay Agra. Sanadkii 1803, waxay hoos tagtay Ingriiska, oo halkaas ka taagnaa Madaxtooyada Agra, iyo markii Hindiya xoriyada qaadatay, magaaladu waxay ku biirtay gobolka Uttar Pradesh, mana helin xitaa xaddiga sharafta ee ah inay tahay caasimada gobolka, kala duwanaanshahaasi wuxuu socdaa ilaa Lucknow, oo bari ka sii fog. Hadda waa magaalo dalxiis, oo loo yaqaan Taj iyo dhowr taallooyin kale.
Riwaayad ku saleysan sheekada cajiibka ah ee ka dambeysa Taj Mahal's waa Hoosada Cirka Marmarka waxaa qoray John Shors. Waa badeecad caalami ah oo caalami ah, waxaana filim ka sameyneysa Hollywood. Riwaayad kale oo taariikhi ah ayaa ah Taj waxaa qoray Colin De Silva.
Agra waxay 200 km koonfur-bari ka xigtaa Delhi waana mid ka mid ah dhibcaha dalxiiska dalxiiskiisa saddexagalka ah ee Agra-Delhi-Jaipur. Agra sidoo kale wuxuu si aad ah uguxiranyahay tareenka iyo wadada magaalooyinka kale ee udhow iyo meelaha loo dalxiis tago sidaa darteedna wuxuu kufiican yahay safar maalinle ah oo ka yimaada Delhi ama qayb kamid ah safarka weyn.
Diyaarad ugu raac Agra
Madaarka Kheria ee Agra. Adeeggu waa xilliyeed. Magaalada waxaa u adeegta Air India Regional, oo ku duusha dariiqa saddex-xagalka dalxiiska ee Delhi-Agra-Jaipur. Waqtiga duulimaadka midkood waa wax ka yar saacad. Kireynta gaari waxay noqon kartaa bedel ka raqiisan.
Tareen ku raac Agra
Agra waxay ku taal khadka tareenka ugu weyn ee u dhexeeya Delhi-Mumbai (Bombay) iyo waddooyinka Delhi-Chennai, tareenno badan ayaa isku xidha Agra iyo magaalooyinkan maalin kasta. Qaar ka mid ah tareenada bari u socdaalaya ee ka yimaada Delhi sidoo kale waxay maraan Agra, sidaa darteed xiriir toos ah meelaha Barta Hindiya (oo ay ku jiraan Kolkata) sidoo kale waa la heli karaa. Waxaa jira ku dhowaad 20 tareen oo taga Delhi maalin kasta, iyo ugu yaraan saddex ama afar Mumbai iyo Chennai. Agra iyo Delhi ayaa caan ku ah ceeryaanta xilliga qaboobaha taasoo yareynaysa aragtida illaa eber. Dabayaaqada Diseembar iyo horraanta Janaayo (xilliga ceeryaanta), aragga oo yaraaday awgeed, tareennada oo dhan way gaabinayaan, waqtiga safarkuna kor buu u socdaa. Bhopal Shatabdi, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inuu yimaado Agra si fiican 10:00 ka dib, waxaana laga yaabaa inuu ku laabto Delhi si fiican saqda dhexe. Marka laga eego dhinaca amniga, had iyo jeer waa la doorbidaa in lagu safro tareen inta lagu jiro xilliga qaboobaha.
Saldhigga Agra, waxaad ka kireysan kartaa "UP Dalxiis" safarro lagusameeyo tababarayaasha raaxada leh ee qaboojiyaha leh. Sidoo kale, safarro abaabulan ayaa laga heli karaa Delhi. Haddii aad safartid inta lagu jiro xilliga sare, waa inaad tikidhadaada sii goosataa dhowr maalmood illaa dhowr toddobaad kahor haddii aad rabto inaad safar maalinle ah ka dhigato, yacni safarka subaxa hore iyo soo noqoshada waqti macquul ah habeenkii.
Tigidhada tareenka waxaa laga dalban karaa khadka tooska ah iyada oo loo marayo bogga internetka ee Tareennada Hindida oo lagu bixiyo kaararka debit ama kaararka deynta, in kasta oo kuwa bangiyada ajaanibta ah soo saaraan badanaa la diido
Agra waxaa ku yaal seddex saldhig:
Agra Cantt (Koodhka Saldhigga: AGC) waa xarunta tareenka ugu weyn waxayna ku taal koonfurta-galbeed ee Taj iyo Agra Fort, oo labaduba ah masaafo gaaban oo saldhigga looga raaco baabuur, auto-rickshaw ama wareegga rickshaw Waxaa jira taksi taksi oo horay loo sii qorsheeyay oo bannaanka ka ah kaasoo qiimahoodu jaban yahay huteellada magaalada ku yaal Waad qaadi kartaa gawaarida loo yaqaan 'auto-rickshaw', haddii aad ka lugeyso meel wax yar u jirta saldhigga, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan ku hadlin Ingiriisiga. Idaacadda waxay leedahay maxkamad raashin oo sidoo kale iibisa cunto fudud oo raqiis ah, oo fayadhawr ah sida ismaris iyo sambuus.
Saldhigga Agra Fort (Koodhka Saldhigga: AF) ee ku dhow Agra Fort, waxaa si aan ku habboonayn ugu adeega tareennada tareennada iskaga goosha gobollada. Saldhigga wuxuu u adeegaa tareenno dhanka bari ah (Kanpur, Gorakhpur, Kolkata), qaar ka mid ah tareenadan waxay sidoo kale istaagaan Agra Cantt.
Tani waa mid ka mid ah saldhigyada tareenka taariikhiga ah ee Agra maxaa yeelay waxaa jiray Tripolia Chowk oo waasac ah, octagonal oo u dhexeeyay Masjidka Jama iyo iridda Delhi ee Agra Fort. Tropolia-kan waxaa loo burburiyay si loo abuuro Saldhigga Tareenka ee Agra Fort, oo sidoo kale ahaa saldhigga tareenka ee ugu horreeya Agra iyo sidoo kale midka ugu da'da weyn dalka.
Raja Ki Mandi (Lambarka Saldhigga: RKM) waa saldhig yar. Tareennada qaar ee ku istaaga Agra Cantt sidoo kale way istaagaan. Saldhigu wuxuu leeyahay jawi dib u dhac iyo caajis leh, laakiin wuxuu ku soo noqnoqdaa nolosha markay yimaadaan tareennada Intercity iyo Taj Expresses. Waxay ku taal bartamaha magaalada.
Magaalada Agra waa qalbiga Agra. Meel ka mid ah xilligii mitirka mitirka, idaacaddan si gaar ah faa'iido uguma laha.
Saldhiga Tareenka Idgah waa saldhigga ugu horreeya haddii aad ka timaaddo Agra magaalada Jaipur.
Delhi ilaa Agra - Ku dhowaad 20 tareen ayaa isku xira Delhi iyo Agra maalin kasta iyada oo waqtiyada safarku kala duwan yihiin 2-5 hr. Fursadaha ugu fiican ayaa ah Bhopal Shatabdi Express (waxay ka amba baxeysaa New Delhi 06:15 markay timaaddo Agra Cantt 08:12; waxay ka tagaysaa Agra Cantt markay tahay 20:30 markay imaanayso New Delhi markay tahay 22:30, maalin kasta marka laga reebo jimcaha; cuntada iyo biyaha oo lagu daro gawaarida hawada lagu raaco) iyo Taj Express (waxay ka amba baxeysaa Delhi Hazrat Nizamuddin saacada 07:15 marka ay timaado Agra Cantt 10:07; waxay ka tagaysaa Agra Cantt markay tahay 18:55 waxay imaanaysaa Delhi Hazrat Nizamuddin markay tahay 22:00, maalin kasta).
Agra ilaa Jaipur - Safarka Jaipur (Lambarka Saldhigga: JP) wuxuu qaadanayaa qiyaastii 4h tareen lambar. 2988 oo ka tagta Saldhigga Tareenka Agra Fort at 18:25 wuxuuna gaaraa Jaipur qiyaastii 22:20.
Sidoo kale tababar lambarka 2965 oo ka socda Agra Cantonment illaa Jaipur at 17:40. Tareenku wuxuu yimaadaa 22:15. ₹ 300 oo gawaari hawo-qaad ah.
The Tareen raaxo leh - Palace on Wheels wuxuu joogsadaa Agra safarkiisa 8-da maalmood ee wareega ee dalxiisyada Rajasthan iyo Agra.
Waxaa jira basas dhowr ah oo taga Agra oo asal ahaan ka soo jeeda Jaipur, Delhi, Ajmer, LuVE iwm.
Laga soo bilaabo Delhi
Wadada weyn ee udhaxeysa Delhi iyo Agra waxay leedahay lacag bixin, sidaa darteed basaska badankood ma qaadaan. Waxayse qaadaan waddooyinka maxalliga ah, taas oo safarka ka dhigaysa mid aad uga dheereeya tareennada xawaaraha ku socda (4-5 saac). Waa suurtagal in basas iyo basas yar looga dhigo Agra waddooyinka yar yar, hase yeeshe waa inaad weydiisaa hareeraha basaska taga Agra, ay doorbidayaan dadka deegaanka lagu kalsoon yahay ama shaqaalaha hoteelka / hoteelkaaga. Saldhigyada basaska Hindida ayaa ah, inta badan meelaha waaweyn ee laamiga ah ee kuyaala isgoysyada, aad ayey u badan yihiin oo aan lahayn tilmaam dheeri ah oo ah meesha basku tagayo ama istaagayo shirkadaha basaska ee gaarka loo leeyahay, taas oo bixin doonta safar raaxo leh oo qiimo sare leh. Ikhtiyaarkan ayaa loogu talagalay kuwa dareema dhiirrigelin, maadaama safarkaaga lagu joojin karo burburka baska ee lama filaanka ah ama xirnaanshaha waddada sababo la xiriira mudaaharaad maxalli ah ama qaab kale oo isu imaatin ah. Xusuusnow in tani ay tahay tan ugu jaban ee Agra lagu tagi karo, maadaama aysan ku kacayn wax ka badan "60" baska "caadiga ah iyo for 200 ee baska nooca basaska ah.
Laga soo bilaabo Agra
Waxaa jira seddex bas oo laga raaco gobollada:
Istaaga Baska Idgah waa istaanka baska aasaasiga ah ee loogu safro Rajasthan / Madhya Pradesh, oo ku taal bartamaha magaalada, 8 kiiloomitir u jirta Taj.
ISBT at Transport Nagar, oo 12 kiiloomitir u jirta Taj, waa meel u dhexeysa basaska gobolka. Basaska badankood way soo maraan halkan, marka laga reebo basaska ka yimaada Idgah Bus istaag kuna socda Rajasthan.
Haddii aad rabto inaad raacdo basaskan ay dowladu maamusho, waa inaad ku adkeysataa darawalkaaga rickshaw inuu ku geeyo halkaas. Haddii aad kaliya weydiisato basaska tagaya Delhi, waxay u badan tahay inuu kuu kaxeeyo shirkad basas gaar loo leeyahay, oo uu ka jaro. Way kugu qaali noqon doontaa adiga basaskani waxay u muuqdaan inay istaagaan meelo aan kala sooc lahayn oo ay kugu ridaan meelo aan kala sooc lahayn sidoo kale, maadaama basaskani aysan toos ahayn.
Waxaad ka dalban kartaa taksi hudheelka ama waxaad toos uga dalban kartaa mid ka baxsan saldhigga tareenka. Badanaa waxaa jira tagaasid dowladeed oo idman, hase yeeshe way adkaan kartaa in la helo oo dadka maxalliga ah ee saldhigga jooga (raadinaya dalxiisayaal caqli-gal ah) ayaan kaa caawin doonin inaad hesho. 950 8 / maalintii XNUMX saacadood. Waa laga yaabaa inay qaali tahay in lagu xareeyo hudheelka maaddaama hudheeladu ay leeyihiin qiimahooda. Way kafiican tahay in wadaha si toos ah loola xaajoodo ama buug loogu qoro bogga kirada baabuurta ee internetka.
Baabuurta looma ogola meel u dhow Dhismaha Taj, laakiin inta kale ee Agra waxaa si fudud loogu ogaadaa baabuur.
Ugu safri gaari Agra
Laga soo bilaabo Delhi: Yamuna Expressway, wuxuu isku xiraa masaafada 200 km ee u jirta Delhi ilaa Agra. Wadiddu caadi ahaan waa 2 saacadood. Jidka weyn wuxuu ka bilaabmaa magaalada Greater Noida ilaa Agra. Wadada weyn waxay leedahay lacag bixin.
Wadada weyn ee loo yaqaan 'NH2 Highway': marinka koowaad ee wadada weyn wuxuu maraa wadada Mathura ee magaalada Delhi laakiin, hadii aad ka timaado South Delhi ama garoonka diyaaradaha ee Delhi, way fududahay in la qaado Aurobindo Marg (Mehrauli Road) ka dibna laga shaqeeyo ilaa NH2 iyada oo loo marayo Tughlakabad. In kasta oo waddada weyn ay kala qaybsan tahay, waxaa muhiim ah in isha lagu hayo gawaarida xamuulka, gawaarida, iyo kaararka dibiga ee ku socda waddo qaldan. Waa suurtagal in la kireysto gaari darawal ah (gaari weyn oo shan qof ah laga bilaabo / illaa garoonka diyaaradaha ee Delhi wuxuu ku kacayaa ,3,500 XNUMX). Laakiin iska jir, haddii aad u baahan tahay inaad ka soo degto Agra illaa garoonka diyaaradaha si aad duulimaad u qabsato, hubi inaad haysato waqti badan oo safarka ah, maxaa yeelay xaaladaha taraafikada ayaa si weyn u kordhin kara waqtiga wadista. Sidoo kale, waa caqli in la ogaado darawalkaaga. Waxaa jira xaalado markii laga yaabo inuu ku qaato shan saacadood inuu ku daboolo masaafada, mana ku qasbi kartid inuu kaxeeyo si ka dhakhso badan otomaatiga (tuk-tuk).
Laga soo bilaabo Jaipur: Wadada Qaranka ee 11, oo ah waddo afaraad ah oo loo qaybiyay afar waddo, ayaa isku xireysa Agra iyo Jaipur iyada oo loo sii marayo magaalada lagu xanaaneeyo shimbiraha ee Bharatpur. Masaafada qiyaastii 255 km waxaa lagu dabooli karaa qiyaastii 4 saacadood.
Laga soo bilaabo Gwalior: Masaafada kudhowaad 120 km, waxay qaadataa ilaa 1.5 saacadood wadada weyn ee Qaranka 3 (Agra-Mumbai Highway).
Laga soo bilaabo LuVE / Kanpur: NH2, waa waddo casri ah oo loo qaybiyay, waxay kusii socotaa Kanpur (285 km, 5 saacadood) halkaasna ilaa laga gaaro ilaa Bariga oo ku dhammaata Kolkata. Laga soo bilaabo Kanpur, NH25 waxay u socotaa magaalada LuVE (90 km, 2 saacadood).
Laga soo bilaabo Lucknow: Wadada Agra-Lucknow, oo ah tan ugu dheer dalka Hindiya, waxay isku xirtaa masaafo dhan 302 km oo u jirta caasimada gobolka, Lucknow ilaa Agra. Wadiddu aad bay u siman tahay waxayna qaadataa 3 saacadood Waa waddo la rogmaday.
Laga soo bilaabo Noida Weyn : Waxaa laga yaabaa wadada ugu fiican maadaama ay si toos ah ugu xirto Agra wadada Yamuna Expressway, 165 km, oo lagu dhameystiri karo 1.5 - 2 saacadood maxaa yeelay waxay leedahay gaadiid yar. Wadadu waa mid aad u siman.
Ku soo wareegida Agra
Tongas, basaska korontada ku shaqeeya iyo dabeecadaha korantada ayaa si fudud loo heli karaa, iyo habka ugu wanaagsan ee loo tago Taj, halkaas oo aan baabuur loo ogoleyn. Auto-rickshaws iyo baaskiil-rickshaws waxaa laga heli karaa meel kasta, xusuusnow inaad si cad horay ugu heshiiso qiimaha. Shisheeyayaashu way ku gorgortamaan gorgortanka meel kasta oo ay si adag u gorgortamaan. Guud ahaan waxyaabaha waxaa laga heli karaa 40% ee qiimayaasha markii hore la soo sheegay. Tempos waxaa lagu beddelay auto-rickshaws, oo inta badan ku shaqeeya CNG (Gaaska Dabiiciga ah ee Tifaftirayaasha).
Hay'adda Gaadiidka Wadooyinka ee 'UP State' waxay ku shaqeysaa qaar ka mid ah basaska aan hawo-qaboojinta lahayn iyo kuwa qaboojiyaha ah laakiin kuwaa waxay ku socdaan oo keliya waddooyin cayiman. Sida ugu wanaagsan ee magaalada lagu soo maro waa inaad socod ku dhex marto Wadada Suuqa (Sadar). Wadada waxaa ka buuxa dukaamo farsamo gacmeed iyo maqaarro. Waxaad sidoo kale heli doontaa waxyaabo badan oo raashin ah oo magaalada u gaar ah.
Maaddaama gawaarida wasakheynta laga mamnuucay agagaarka Taj Mahal, qofku wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo Tonga ama baabuur koronto inta uu ku dhex safrayo baaxadda Taj Mahal. Geel sidoo kale waa la heli karaa. Tilmaame ahaan, rickshaw otomaatig ah oo ka socda saldhigga Agra Cantonement ilaa Taj Mahal waa qiyaastii ₹ 80 (ugu yaraan xilliyada fasaxa); iyo wareegga gawaarida ee Taj Mahal ilaa Agra Fort waa ₹ 40. Waxaad sidoo kale ku socon kartaa inta u dhexeysa Taj Mahal iyo Agra Fort, illaa 30 daqiiqo.
Agra, Taj Mahal iyo Fatehpur Sikri Xalaal Maalinta Safarka ee ka yimid Delhi
Laga soo bilaabo Delhi ilaa Agra
Waxaa ku weheliya hagahaaga gaarka ah ee ku hadlaya Ingiriisiga oo leh gaadiid hawo qaboojiye ah & cunnooyin Xalaal ah.
Hoteelka Mandakini Villas Agra
Hoteelka Taj Plaza Agra
Mayur Dalxiis Dhisme Hotel Agra
Hoteelka Gateway Fatehabad
Hoteelka Oberoi Amarvilas Agra
Hoteelka Wyndham Grand Agra
Xaaladda Covid-19 ee Hindiya
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Hindiya > Tilmaamaha Safarka Agra Xalaal
Anantara Dhigu Maldives	    
Safarka Xalaal ee Turkiga